ဘ၀ ဒဿန | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
ဘ၀ ဒဿန	# လောကဓံ ကြောင့် အရောင်ပြောင်းခြင်းPublished September 11, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in ဘ၀ ဒဿန | Tagged ကျရှုံးချိန်, နိမ့်မြင့် တက်ကျ, အရောင်ပြောင်းခြင်း, လောကဓံ တရား, အောင်မြင်ချိန်	# ဗေဒင်ပညာ နှင့် အတွေးအမြင်Published September 19, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in ဘ၀ ဒဿန | Tagged MaHaBote, Myanmar Astrology, ဗေဒင်ပညာ နှင့် ခံယူသင့်သော သဘောထား, ဗေဒင်ပညာ နှင့် ဘာသာတရား, ဗေဒင်ပညာဆိုတာ	# အပြုံးနဲ့ ကြိုဆို , အငိုနဲ့ နှုတ်ဆက်Published July 23, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲ့ ဇနီးသည် ဆုံးပါးသွားလို့ “အသုဘ” သွားမေးဖြစ်တယ်။ အသက်က (၄၈)နှစ်။ ကျွန်တော့်ထက် တစ်နှစ် ငယ်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်က ဆရာဝန်,မ။ ကင်ဆာရောဂါကို (၁၂)နှစ်ကြာအောင် ကြံ့ကြံ့ခံရင်း နောက်ဆုံး လက်မြှောက် အရှုံးပေး သွားခဲ့ရတာပါ။ သမီးလေး (၃)ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
. . . ကားတွေ တစ်စီးပြီး တစ်စီး ဆိုက်လာမယ် . . . လိုက်လံပို့ဆောင်သူတွေ မျက်နှာ မသာမယာနဲ့ ကားတွေပေါ်က ဆင်းလာမယ် . . . ဆလွန်းကားပေါ်က မိသားစုဝင်တွေ /ဆွေမျိုးတွေ မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင် နဲ့ ဆင်းလာကြမယ် . . . ပြင်ဆင်ထားတဲ့ “ကွယ်လွန်သူ” ရဲ့ ရုပ်အလောင်းကို တစိမ့်စိမ့် ကြည့်ကြရင်း နောက်ဆုံးခရီးကို “အငို နဲ့ နှုတ်ဆက်” ကြမယ် . . . စိတ်မခိုင်တဲ့ သူတွေဆိုရင် အော်ကြ၊ ဟစ်ကြမယ်။ ရင်ဘတ် စည်တီးကြမယ် . . . အပူလုံးဆို့ပြီး “တက်” သွားလို့ ၀ိုင်းပြီး နှိပ်ကြ နှယ်ကြရမယ် . . . နောက်ဆုံးတော့ အလောင်းကို မီးသင်္ဂြိုဟ်စက် ထဲ ထည့်လိုက်မယ် . . . ခေါင်းတိုင်က အငွေ့တလူလူ ထွက်လာမယ် . . . ခဏနေရင် လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသွင်သဏ္ဍန် ကနေ “ပြာအိုး” တစ်အိုးအဖြစ် ပြောင်းလဲ ရောက်ရှိသွားမယ် . . . ပြီးရင် ကျန်ရစ်သူ မိသားစု / ဆွေမျိုး နဲ့ လိုက်ပါ ပို့ဆောင်သူတွေ ပြန်ကြမယ် . . . နောက်ထပ် ကားတွေ တစ်စီးပြီး တစ်စီး ဆက်ရောက်လာမယ် . . . ဒီမြင်ကွင်းတွေကတော့ “ရေဝေး” ကို ဘယ်အချိန်ရောက်ရောက် မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ မြင်ကွင်းတွေပါ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ခရီး အဆုံးသတ် မြင်ကွင်းတစ်ခု ပါ။ လူ့ဘ၀ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးကို “အငို နဲ့ နှုတ်ဆက်” ကြရတဲ့ မြင်ကွင်းပါ။ လူတန်းစားအမျိုးမျိုး၊ အသက်အရွယ် အစုံစုံ သာပြောင်းလဲ နေလိမ့်မယ်။ အားလုံးကတော့ လူ့ဘ၀ရဲ့ အပြန်ခရီးကို “အငို နဲ့ နှုတ်ဆက်” ကြတဲ့ ပွဲပါဘဲ။
Posted in ဘ၀ ဒဿန | Tagged ဘ၀ ဒဿန, လူ့ဘ၀၏ နောက်ဆုံးခရီး, သင်္ချိုင်း, သံဝေဂ, အတွေးအမြင်, အပြုံးနဲ့ ကြို အငိုနဲ့ နှုတ်ဆက်, နောက်ဆုံးခရီး, ရေဝေးသုဿန်	# ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ . . အပိုင်း (၄)Published January 24, 2010 | By dr.tin bo bo	ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာကို ရေးလာတာ ဘာလိုလိုနဲ့ အပိုင်း(၄)ကို ရောက်လာပါပြီ။ ဖတ်တဲ့လူတွေတော့ ငြီးငွေ့နေကြပြီလား မသိပါဘူး။ တစ်ချို့တွေ ငြီးငွေ့ကောင်း ငြီးငွေ့နိုင်ပေမယ့် တစ်ချို့ကတော့ အလွန် စိတ်အားထက်သန်စွာ စောင့်မျှော် ဖတ်ရှု နေကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းလေးကတော့ အပိုင်း (၃)မှာ မပြောလိုက်ရတဲ့ “ဣသာမစ္ဆရိယ” အကြောင်းလေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (60,772)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (49,425)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (47,204)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (32,047)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (24,072)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (15,384)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (13,207)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,713)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,752)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,408)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,356)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (10,216)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (10,164)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,134)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,456)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,414)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (9,088)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,908)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,763)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,756)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,292)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,896)# မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (7,786)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,744)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,614)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,568)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,354)# မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)ခုနှစ် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,182)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (7,162)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (7,064)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !